IGolan Heights entle eZimmer - I-Airbnb
IGolan Heights entle eZimmer
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguGalit
Silusapho lwakwaSirayeli oluhlala kwi-Golan Heights, kwaye sirenta le Zimmer intle neNtosekile ngalo lonke ixesha. Ime kwicala elingasentla leendawo eziphakamileyo zeGolan kwilali encinci, intle kwaye intle. Indawo ilungile, iORVIM STREAM ngasemva kwelali umgama nje omfutshane ukusuka eHERMON MOUNTAIN skiing I-NIMROD CASTLE, BANIAS kunye nazo zonke iindawo ezinomtsalane zeGolan Heights kunye neGalili! indlu yethu isecaleni kweZimmer, ngoko sifumaneka kuyo yonke into oyifunayo.
indawo ibandakanya ibhedi ephindwe kabini, indawo encinci yokusebenza, iTV eneNetflix kunye namajelo, Igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi elincinci.
Zombini iilwandle zolwandle lwaseGalili kunye nentaba yeHermon skiing resort yi-30 min drive ukusuka apha. kwakhona kukho ii-Pubs ezintle ezimbalwa kunye neeresityu nje nge-7 min drive ukusuka kwindawo, kwiziko lokhenketho 'Wasset'.
Umbuki zindwendwe ngu- Galit
asinikezeli isidlo sakusasa, kodwa sibonelela ngeKofu, ubisi, iti kunye nokutya. Indlu yethu ifumaneka kumganyana nje osuka eZimmer, kwaye siyafumaneka ngayo yonke into oyifunayo. nceda uzive ukhululekile ukungena! siqhelene kakhulu nommandla kwaye ungabonisana nathi ngayo nantoni na malunga nokuhlala kwakho.
asinikezeli isidlo sakusasa, kodwa sibonelela ngeKofu, ubisi, iti kunye nokutya. Indlu yethu ifumaneka kumganyana nje osuka eZimmer, kwaye siyafumaneka ngayo yonke into oyifunayo.…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kela alon